Borosy Photoshop tsara indrindra: Ireto no tsara indrindra aminao | Famoronana an-tserasera
Raha mahazatra ianao ao amin'ny Photoshop, dia azo antoka fa ny iray amin'ireo zavatra manintona anao indrindra amin'ny programa dia ny borosy Photoshop. Tsy vitan'ny hoe miaro ny habakao fotsiny izy ireo, fa afaka mahazo zavaboary tena mahomby ihany koa ka hanakorontana anao ny mpanjifanao, sa tsy izany?
fa, Inona ireo borosy Photoshop? Inona avy ireo borosy Photoshop tsara indrindra? Ahoana no hampiasana azy ireo? Hiresaka aminao momba izany rehetra izany izahay sy ny maro hafa etsy ambany, mba hahafantaranao tsara hoe iza izy ireo ary ambonin'izany rehetra izany dia manome anao ohatra ny borosy tsara indrindra any.
1 Inona ireo borosy Photoshop
1.1 Ahoana ny fametrahana ny borosy Photoshop tsara indrindra
2 Ny borosy Photoshop tsara indrindra amin'ny hosodoko
2.1 Borosy Photoshop tsara indrindra: Wavenwater
2.3 Borosy Photoshop tsara indrindra: Aaron Griffin
2.4 Borosy nataon'i LilithDemoness
2.6 Borosy azo tanterahina avy amin'i Eilert Janßen
2.7 Borosy hoditra olombelona
2.8 Borosy Photoshop tsara indrindra: loko haingana
2.9 Borosy atmosfera
2.10 Borosy misy vokany fitaratra vaky
2.11 Borosy borosy
Inona ireo borosy Photoshop
Ny borosy Photoshop dia fantatra koa amin'ny borosy. Ireo dia endrika efa voatendry ary ampiana amin'ny fitaovana borosy Photoshop. Betsaka ny isan-karazany, ary raha ny marina dia afaka mamorona anao manokana ianao ary mizara izany amin'ny hafa.
Manompo ry zareo mamorona môtô sy ny forongon-tsary, mba hahatonga ny sary ho tonga saina kokoa na mahafinaritra.
Ahoana ny fametrahana ny borosy Photoshop tsara indrindra
Raha ny fametrahana ny borosy izay horesahintsika manaraka dia inona no tadiavinao dia tokony ho fantatrao hoe ahoana no ampio azy ireo amin'ilay programa. Ny zavatra voalohany tokony ho fantatrao dia ny fiafaran'ireo rakitra ireo amin'ny .abr. Ny tokony hataonao raha vantany vao alaina ny borosy dia ny fametrahana azy ireo ao amin'ny folder Photoshop brushes. Matetika, amin'ny alàlan'ny default, amin'ny C: / Program Files / Adobe / Adobe Photoshop CC (kinova) / Presets / Brushes.
Manoro hevitra anao izahay, raha vao manana azy ireo any ianao, dia soloinao anarana izay teny fantatrao, indrindra raha manana borosy maro ianao. Ankehitriny, tsy maintsy manokatra ny programa Photoshop fotsiny ianao ary hanana ilay fitaovana borosy, ary ilay kiheba izay hita eo amin'ny menio ambony. Azonao atao ny mahita ny lisitra iray manontolo hahazoana ilay ilainao.
Ny borosy Photoshop tsara indrindra amin'ny hosodoko
Satria fantatray fa tianao ny ho azo ampiharina, ary ny zavatra ilainao dia ny mahafantatra fitaovana vitsivitsy hanaovana ny asanao, dia hanome hevitra anao izahay inona avy ireo borosy Photoshop tsara indrindra. Malalaka ny maro amin'izy ireo, noho izany mila mitady azy fotsiny ianao, misintona azy ary manomboka mampiasa azy. Ny hafa dia karama, saingy mendrika izany izy ireo.
Te hahafantatra ve ianao hoe iza no tsara indrindra ho anay?
Borosy Photoshop tsara indrindra: Wavenwater
Ity borosy ity dia azonao ampiasaina amin'ny fampiasana anao manokanaFa raha mifandray amin'ny mpamorona azy ianao, Michael Guimont, dia mety hanome anao fahazoan-dàlana hahazo lisansa ara-barotra izy. Ao anatin'izany dia tsy hahita borosy tokana ianao, raha ny marina dia misy maro hafa izay manome vokatra tsy manam-paharoa tetikasa.
Amin'ity fomba ity dia tsy mila mamorona borosy tsy tapaka ianao, fa efa vitanao daholo (na saika ny rehetra).
El Ny fonosana borosy Photoshop an'i Carles Marsal dia iray amin'ireo feno indrindra any, ary mamela anao tsy hanana borosy rahona fotsiny, fa koa ny firafitra, mifangaro eo amin'ny zavakanto sy ny sary ...
Ny iray tena mitovy amin'ny an'i Jonas de Ro. Raha ny marina dia voalaza fa ny an'i Carles Marsal dia iray hafa.
Borosy Photoshop tsara indrindra: Aaron Griffin
Ny mpamorona azy, Aaron Griffin, dia nanafaka ny borosy Photoshop ho an'ny fampiasana ara-barotra sy manokana. Ity mpanao sary sy mpanakanto mpaka sary ity dia miavaka amin'ny famoronana olo-malaza sasany, ary, mazava ho azy, manolotra ny "loharanom-bolany" maimaimpoana izy.
Raha afaka mihazona azy ireo ianao dia aza misalasala ary manararaotra azy ireo, satria ho tsara kokoa ny tetikasanao.
Borosy nataon'i LilithDemoness
ihany koa atolotra maimaim-poana ho an'ny fampiasana manokana sy ara-barotra, LilithDemoness, ilay anarana ananan'ity mpanakanto ity ao amin'ny DeviantArt, dia manolotra borosy 14 ho anao, izy rehetra dia miorina amin'ny lokon-doko izay toa mitombina, mba hahafahanao manome ny famaranana an'io asanao io.
Raha mitady hanome ny zavaboarinao fahatsapana ny zava-misy amin'ny ranomainty ianao dia mila manandrana ireo. Izy io dia famolavolana mifototra amin'ireo borosy Photoshop tsara indrindra ka toa nandoko tanana ny pitsopitsony, na hoe teo foana izy ireo.
Ny mpamorona azy dia Brittney Murphy ary manolotra ireo borosy ireo maimaim-poana amin'ny fampiasana ara-barotra sy manokana. Anisan'ireo hitanao ireo tasy fandokoana, tsipika matevina sy manify, sns.
Borosy azo tanterahina avy amin'i Eilert Janßen
Maimaimpoana koa ireo borosy Eilert Janßen ireo, na amin'ny tetik'asa manokana na ara-barotra no ampiasanao azy. Izy ireo dia misy borosy 12 izay hanome ny sarinao sary toa ny nandoko tamin'ny marika.
Mazava ho azy fa tsy izy ireo ihany no ananan'ity mpamorona ity, misy Borosy marika maherin'ny 300 mora vidy ho an'ny script, endrika indostrialy na lamaody.
Borosy hoditra olombelona
Mila manome ohatra ny fahatsapana ny hoditry ny olombelona ve ianao? Aza misalasala, eto ianao manana io safidy io. Izy io dia famoronana ny mpampiasa env1ro izay manolotra ho an'ny tena manokana ihany (ho an'ny dokambarotra tokony soratanao aminy).
Ity mpanakanto poloney ity dia namorona borosy handokoana ny hoditr'olombelona, ​​saingy izy ireo dia mety tsara amin'ny fikolokoloana na makiazy.
Borosy Photoshop tsara indrindra: loko haingana
Raha mila loko fohy ianao, dia lavorary ireo avy amin'i Darek Zabrocki. Raha tsy fantatrao, ity mpamorona ity dia iray amin'ireo malaza indrindra manerantany, indrindra satria niasa tamin'ny orinasa namoaka lalao toa ny Halo Wars 2, Assassin's Creed na Magic: The Gathering ianao.
Ankehitriny, manolotra anao izy io afaho ny borosinao, na amin'ny fampiasana anao manokana na amin'ny ara-barotra.
Raha ny tadiavinao dia ny manome endrika hafa sary, sary na sary, miaraka amin'ireo borosy ireo dia azonao atao ny manatratra azy. Ny mpamorona azy dia DeanOyebo ary izy ireo dia azo ampiasaina amin'ny fampiasana ara-barotra sy manokana. Raha ny marina, ny sary natolotry ny mpanakanto dia manondro fa noforonina niaraka tamin'ny borosy tao anaty fonosana maimaim-poana.
Borosy misy vokany fitaratra vaky
Ny fakana sary anaovan'ny olona vaky vera dia tsara. Saingy ankehitriny tsy voatery ho tena izy noho ireo borosy izay maka tahaka an'io. Afaka mahita karazana isan-karazany ianao, Mila mahita ilay mifanaraka amin'ny zavatra tadiavinao fotsiny ianao.
Azonao an-tsaina ve ny tsy mila manintona zavamaniry fa mampiasa borosy ho azy? Eny, izany no famoronana nataon'i B Silvia. Malalaka izy ireo (fampiasana manokana sy ara-barotra, na dia mitaky porofon'ny fananana aza).
Amin'ny alàlan'ny Internet dia afaka mahazo bebe kokoa ianao borosy Photoshop tsara indrindra. Mila manokana fotoana fotsiny ianao hahitana izay tadiavinao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Cheats » Borosy Photoshop tsara indrindra